Iindaba - Ngaba iLebhokisi yokuziCoca yeLitter ayisebenzi kangako?
Ngaba ibhokisi yokuzihlambulula iyacoca?
Yeyona nxalenye incinci oyithandayo yokukhulisa ikati: ukucoca ibhokisi yenkunkuma yekati. Kuze kwenzeke oko, ukuvela kweebhokisi zeenkunkuma zokucoca iikati kudala ukhetho lokuba ibhokisi yenkunkuma icoceke emva kwekati yakho.
Kodwa ngaba ezi bhokisi zenkunkuma zokuzihlambulula zincinci ngokwenene umsebenzi? Ngeendlela ezininzi kunye noyilo kunye nohlobo oluhlaziyiweyo oluhlaziyiweyo, zininzi izinto onokukhetha kuzo ukufumana umdlalo oqinisekileyo wakho kunye nekati yakho.
Ibhokisi yenkunkuma yekati yethu ezenzekelayo ikuvumela ukuba ucinge ngaphandle kwebhokisi yenkunkuma yekati yokuthatha isigqibo sokuba ibhokisi yenkunkuma ngokuzenzekelayo ifanelekile.
Iziseko zeLitter Box yokuziCoca
Ngebhokisi yenkunkuma yokuzicoca, igumbi lokulahla inkunkuma, iiraki, ukugungxula okanye ukuqokelela inkunkuma yaselunxwemeni, ekuvumela ukuba unxibelelane kancinci nomchamo wekati kunye nelindle kunye nokuphelisa isidingo sokukhuphela itreyini yenkunkuma yonke imihla. Uninzi lweebhokisi zenkunkuma ezizenzekelayo zibhaqa xa ikati yakho iyisebenzisile kwaye iya kucoca ukuze kwixesha elizayo xa zihamba, zibe nenkunkuma entsha necocekileyo.
Phantse abazali bekati bathi umxholo webhokisi yenkunkuma yokuzicoca ilungile, kuba akukho mntu uthanda ukucoca iibhokisi zenkunkuma. Kuhamba nokuba nekati, ngokufanayo nokuhamba nenja okanye ukucoca ikheyiji ye-ferret.
Ukwenza iikati zethu zingaguquguquki ekusebenziseni ibhokisi, kufuneka siyicoce yonke imihla-nokuba kaninzi ngemini-ngumceli mngeni weentsuku zomsebenzi omde kunye nokuninzi ekufuneka sikwenzile ekhaya. Ukuba ibhokisi ayihoywa kwamanye amakhaya axakekileyo, oko kunokudala imiba engafanelekanga yokuphelisa. Kodwa ibhokisi yenkunkuma ngokuzenzekelayo inokunceda ukunciphisa le ngxaki.
Nangona kunjalo, ukuba amagama athi "ibhokisi yenkunkuma ezenzekelayo" yenza umfanekiso wengqondo wendawo engenamsebenzi, cima loo mfanekiso! Ibhokisi yenkunkuma ngokuzenzekelayo isathetha umsebenzi othile, nangona iya kwahluka kwindlela yesiqhelo yebhokisi yenkunkuma. Iibhokisi zenkunkuma ezizenzekelayo ziya kufuna ukuba ukhuphe itreyi okanye igumbi eligcina inkunkuma yekati ehlunyiweyo kunye nokubuyisela okanye ukuzalisa inkunkuma yekati ukuze isebenze.
Ixesha lokuposa: Meyi-18-2021